Plasma 5: Kubuntu တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နှင့်စမ်းသပ်ရမည်နည်း 14.04 | Linux မှ
Plasma 5: Kubuntu 14.04 တွင်မည်သို့တပ်ဆင်။ စမ်းသပ်ရမည်နည်း
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်ပြောခဲ့ဖူးသည်မှာအလုပ်ခွင်ရှိကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ကျွန်ုပ် install လုပ်ခဲ့သည် Debian စစ်ဆေးခြင်း နှင့် KDEနှင့်မနေ့ကကတည်းကငါ installed Kubuntu ၁၉.၁၀ အမှန်တရားကိုပြောပြနိုင်ဖို့ကျွန်တော့်ပါးစပ်မှာအကောင်းဆုံးအရသာရှိခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ဟေး, ငါတစ်ပြန်လည်သုံးသပ်စေရန်ငါ့ရည်မှန်းချက်မဟုတ်ပါဘူး Kubuntu ယခုငါအများစုနှင့်အတူ login toggling ကတည်းက အိမ်ထောင်ဖက်.
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်သည်အချိန်ကြာလာသည်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်မည်သို့ပြောင်းလဲနေသည်ကိုကြည့်ရှုရန် Kubuntu တွင် Plasma5ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုရှာဖွေပြီး Ubuntu ၏ကိစ္စတွင်ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆောင်ရွက်ပေးသော (နှင့်အလုပ်လုပ်ရန်) PPA တစ်ခုရှိသည်။ ။
Plasma5ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
Plasma Next ကို install လုပ်ရန် Kubuntu 14.04 တွင် terminal တစ်ခုကိုဖွင့်ပြီးထားရန်လိုသည်။
sudo add-apt-repository ppa: neon / kf5 sudo apt-get update sudo apt-get install-project-neon5-session project-neon5-utils project-neon5-konsole project-neon5-breeze project-neon5-plasma-workspace-wallpapers
Plasma Next ကို install လုပ်ရန် Kubuntu 14.10 တွင် terminal တစ်ခုကိုဖွင့်ပြီးထားရန်လိုသည်။
sudo apt-add-repository ppa: kubuntu-ppa / next sudo apt-get update sudo apt-get dist-upgrade sudo apt-get install kubuntu-plasma5-desktop plasma-workspace-wallpapers
ယခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် session ကိုပိတ်ပြီးမှတဆင့်ဝင်ရောက်ရန်ရွေးချယ်သည် Neon စီမံကိန်း ၅။ သတိပြုသင့်သည်မှာ / opt / တွင်ထည့်သွင်းထားသောကြောင့်ဤတပ်ဆင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ KDE installation ကိုအနည်းဆုံးထိခိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်အခြေခံ package များကိုသာတပ်ဆင်သည်။ အခြားသူများလည်းထည့်နိုင်သည် စီမံကိန်း - neon5-Kate.
တပ်ဆင်မှုကိုဖျက်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့သည် console တွင် execute သာဖြစ်သည်။
Plasma5နှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်မှတ်ချက်ပေးခြင်း၊ ၎င်းကိုပြီးပြည့်စုံစွာအသုံးပြုနိုင်သော်လည်း၎င်းတို့သည်သူတို့ရှေ့တွင်အလုပ်များစွာရှိနေသေးကြောင်းပြသသည်။ ငါအနှစ်သက်ဆုံးအပြောင်းအလဲတစ်ခုမှာ Preferences ၌ဖြစ်သည် KDE, နည်းနည်းဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပုံတွင်သင်ရွေးစရာအချို့ကျန်နေသေးသည်ကိုတွေ့နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်ကိုမအောင်မြင်သေးသောအခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များ - system tray ရှိအိုင်ကွန်များ - အတူတကွအလွန်နီးကပ်ပြီးတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အပေါ်မှပုံရသည်။
အသစ်အခင်းအကျင်းဆောင်ပုဒ်ကိုဖွင့်သောအခါမှန်ကန်သောအစွန်းနှင့်ပြproblemsနာများရှိသည်၊ ထို့ကြောင့် Air သည်ပုံမှန်အားဖြင့်လာသည်။ ဤအရာများနှင့်အခြားသေးငယ်သောအရာများသည် Plasma5ကိုရှေ့ဆက်ဖို့လိုအပ်နေဆဲဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ » Plasma 5: Kubuntu 14.04 တွင်မည်သို့တပ်ဆင်။ စမ်းသပ်ရမည်နည်း
E: kubuntu-plasma5-desktop package ကိုရှာ။ မရပါ
E: Plasma-workspace-wallpapers package ကိုရှာမရနိုင်ပါ
ငါ post ကို updated ။ ပြနာကငါက Kubuntu 14.10 မှာဘယ်လိုထည့်သွင်းရမလဲ၊ ဒါပေမယ့် Kubuntu 14.04 မှာမဟုတ်ဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အမှန်စင်စစ် elav ကိုတန်ဖိုးထားလေးမြတ်သည်။ သင်သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း၎င်းသည် apha တစ်ခုဖြစ်ပြီးကြည့်ရှုပြီးသိချင်စိတ်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အတွက်၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောပို့စ်ဖြစ်သည်။
Plasma5ကိုစမ်းသပ်ရန်လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်က Kubuntu 14.04.1 (64) တွင်၎င်းမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသိရှိရန်နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင်၎င်းကို uninstall လုပ်ပြီးစီးခဲ့သည်။
သူတို့ကိုယ်တိုင်ရှင်းလင်းချက်အရ၎င်းသည် alpha တစ်ခုမျှသာဖြစ်ပြီး၎င်းကိုစမ်းကြည့်ရန်ဆုံးဖြတ်သော်လည်း၎င်းသည်အစိမ်းရောင်ရှိဆဲဖြစ်သူများအတွက်သီးခြား ISO တစ်ခုတွင် Kubuntu 14.10 beta နှင့်အတူပါရှိသည်။
အဓိကမေးခွန်း elab: kxx5ကို install လုပ်ရန်သင်အားအကြံပြုလိုပါသလား။
ပို၍ အရေးကြီးသောနောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခု - ကျွန်ုပ်သည်လက်ပ်တော့ကိုဆောင်းတွင်းရာသီသို့ရောက်စေသောအခါ၎င်းကိုဖွင့်သောအခါဂရပ်ဖစ်စနစ်သည်မှန်ကန်စွာအလုပ်မလုပ်ပါ (ပုံပျက်ပုံများ၊ အစင်းများစသည်ဖြင့်) ဤပြproblemနာသည်သင်နှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိသလား။ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲသိလား
ps: တကယ်တော့ kde5ကိုရွှေ့ဖို့ကျွန်တော့်စိတ်ကူးကဒီပြproblemနာကိုဖြေရှင်းနေသလားဆိုတာကြည့်ဖို့ပါ။
ထို့အပြင်သူတို့သည်အလွန်ဆိုးဝါးသော taskbar icon များကိုမဖယ်ရှားပေးနိုင်သေးပါ (minimize, maximize and close) ။ တခြားအရာအားလုံးမှာအရသာရှိတယ်။
ငါ Kubuntu 14.10 ကိုသုံးလျှင်၎င်းကိုမည်သို့ဖယ်ထုတ်ရမည်နည်း။ terminal ကိုဖယ်ရှားရန်အတွက် code သည်အလုပ်မလုပ်ပါ။
ကောင်းတယ် Kubuntu 14.10 သည် plasma5နှင့်မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။ ဒါကကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်လား၊
အမှန်တရားကတော့ 4.xx သည်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ် installation လုပ်ခြင်းနှင့်စိတ်ပျက်စရာမရှိပါ။ ငါ VBox တွင်စမ်းကြည့်ပြီးပါပြီ၊ သို့သော်၎င်းသည်မတူပါ။
အီး: စီမံကိန်း - neon5-session ကိုအထုပ်တည်နေရာမရနိုင်ပါ
E: စီမံကိန်း - neon5-utils အထုပ်ကိုရှာ။ မရပါ
E: စီမံကိန်း - neon5-konsole အထုပ်ကိုရှာ။ မရပါ
ငါ Kubuntu 14.04 ကိုအသုံးပြုသည်
Shadowrun DragonFall: Steam တွင်အလွန်ကောင်းမွန်သော RPG ရှိသည်